Nagu Saabsan - Wuxi Zhongshuo Machines Qalabka Co., Ltd.
Khabiir ku xeran qulqulka xawaaraha ee ay soo saartey Abrasives Belt መፍida birta: Bartilmaameedka ayaa na hagaya oo aan ku hayno cilmi-baarista maaddada qodista birta iyo nadiifinta aaladaha isku-xidhan ee laga soo bilaabo 1990-meeyadii. Sannadkii 2005 waxaan bilownay qaabeynta, soosaarista iyo isku dubarida mashiinnada shiidi weelka birta. Iyada oo la ballaarinayo ganacsiga joogtada ah iyo isbedelka qaab-wadaageyaasha saamiyada, sanadkii 2015 Wuxi Zhongshuo Machines Co., Ltd ayaa la aasaasay.
Waxaan nahay shirkad leh milkiilaha cabbirka dhexda. Shirkaddu waxay ku taalaa magaalada Wuxi City, Gobolka Jiangsu. Magaalada caasimada ka diiwaan gashan waa 1 milyan oo Euro. Mashiinka cadayashada. Aagga dhismaha wuxuu ka sarreeyaa 7000 m2. Wadarta tirada shaqaalaha ayaa ka badan 60, oo ay ku jiraan 1 Injineer heer cilmiyeed, 2 injineer sare iyo 5 injineer. Waxaan leenahay qaabeyn qaabeyn, soosaarid, isu-uruurinta, rakibidda, komishanka iyo kooxda adeegga iibka. Waxaan soo saareynaa mashiinka warshadeynta mashiinka waardiyaha iyo warshadaynta, mashiinka cadayashada.Mashiinka dhammeystirka muraayadda, mashiinka dhammeystirka gariirka, mashiinka bir-ka-dhigista ee birta iyo xaashida, oo ay kujirto qaybta soo-galidda iyo bixidda ee CGL (Xariiqda Mashiinka Wax-ka-qabashada Xilliga Mashiinka Miiska) iyo CPL (Khadka Tooska ah ee Meel-u-marinta Xarunta Xarunta Adeegga), ie Unwinder, Reeuter, Car Loading, Pinch Roll, Flattener, Crop Shear, Nidaamka Dhiirrigelinta iyo Nidaamka dib u warshadeynta, Nidaamka Dhaqitaanka iyo Qalajinta, Mistur Collector, Nidaamka Dabka Dabka. Waxaan sidoo kale soo saarnaa aaladda Loading oo leh Vacuum Cups Group oo loogu talagalay Sheet ilaa Sheet Grinding Line.
Liiskeena tixraaca waxaa ka mid ah Tisco Daming, Wuxi Puxin, Zhejiang Bohai, Western titanium, Qalabka Caafimaadka ee Shinva iyo macaamiisha kale ee Shiinaha ee sida weyn loo yaqaan. Waxaan u dhoofinay alaabadayada wadan yurub ah sida Talyaniga, Turkey oo leh Aqoonsiga CE. Waxaan sidoo kale siinnaa aalado cabbiraya xakamaynta mucjisooyinka Shiinaha ee alaabada u keenaya Hawada iyo Warshadaha Nuclear-ka.
Si loo abuuro qiimaha macaamiisha ayaa ah raadkeenna joogtada ah. Ku qanacsanaantaadu waa awoodda hal-abuurnimadayada joogtada ah.